Antso an’efitra ny an’ny Eveka sy ny FFKM: fihantsiana sy amboletra ny etsy amin’ny HCC | NewsMada
Antso an’efitra ny an’ny Eveka sy ny FFKM: fihantsiana sy amboletra ny etsy amin’ny HCC
Tsy misy mihaino ? Samy miantso fitoniana amin’izao fiandrasana voka-pifidianana ofisialy havoakan’ny HCC izao ny sehatra rehetra. Anisan’izany ny sehatra iraisam-pirenena toy ny Frankofonia (OIF), ny Vondrona eoropeanina (UE), ny Fivondronamben’ny eveka (Fem), ny FFKM ary koa ireo mpanara-maso fifidianana eto an-toerana sy avy any ivelany miaraka amin’ny fiarahamonim-pirenena. Karazan’ny antso an’efitra ihany anefa izany raha ny tranga miseho etsy amin’ny HCC Ambohidahy. Efa herinandro izao ny hetsika ataon’ireo andiana olona vitsivitsy sy milaza ho mivoy ny fanorenana ifotony (HFI). Miezaka ny mandrangitra sy manao ny fomba rehetra hahitan’ny olona azy ireo amin’ny ambara fa feom-bahoaka, itakiana ny hanafoanana mihitsy ny fifidianana filoham-pirenena. Eo koa ny fitakiana ny hanokafana indray ny lisi-pifidianana na efa mazava aza ny voalazan’ny lalàna fa tsy azo atao intsony izany.
Fihantsiana sy amboletra…
Efa fihantsiana sy karazan’ny amboletra ny ataon’izy ireo ary tsy mihaino sy manao bemarenina manoloana ny antso avo ataon’ireo sehatra rehetra, indrindra fa ny eo anivon’ny fiangonana, ny amin’ny tokony hitoniana sy hametrahana filaminana, manoloana izao fifidianana izao. Iza ny tena ao ambadik’izao hetsika ho amin’ny fanakorontanana izao ? Efa tonga hatrany amin’ny fandorana fiara ny raharaha, omaly.
Hanao ahoana ny hamoahan’ny HCC ny voka-pifidianana rahampitso ? Tahaka ny ahoana ny fepetra horaisin’ny fanjakana sy ny Emmo/Reg satria mety samy ho avy eny an-toerana ny mpiandany amin’ny kandidà roa ho amin’ny fihodinana faharoa. Eo koa ireo miandany amin’ireo kandidà 25, ankoatra ireo liam-baovao.
Lalao baolina kitra iraisam-pirenena…
Mifanindry amin’izany koa ny lalao baolina kitra iraisam-pirenena etsy Mahamasina, handraisan’ny Elgeco Plus ny ekipa avy atsy Zimbaboe. Raha sanatria resy ny solontenantsika, inona ny hitranga, aorian’ny lalao na ekena aza fa lalao efa ny tolakandro izany ? Mitaky fepetra sy andraikitra manokana avokoa izany rehetra izany mba tena hipetrahan’ny fitoniana sy filaminana eto amin’ny firenena, araka ny antso avo nataon’ireo sehatra samihafa voatanisa eo ambony. Ny fanapahan-kevitra tsy am-piheverana koa anefa, mety vao mainka handrehitra ny afo ? Zaran’ny sasany aza!